वडा अध्यक्ष प*क्राउ | के प्रे’मिकालाई मा*रेकै हुन् त ? यस्तो छ घट’नाको वास्तविकता हेर्नुहोस् Kailai News | Public 24Khabar
Home News वडा अध्यक्ष प*क्राउ | के प्रे’मिकालाई मा*रेकै हुन् त ? यस्तो छ...
वडा अध्यक्ष प*क्राउ | के प्रे’मिकालाई मा*रेकै हुन् त ? यस्तो छ घट’नाको वास्तविकता हेर्नुहोस् Kailai News
कैलालीमा कार्यवाहक वडाध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका-३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष निरज चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । २२ वर्षीया प्रेमिका सञ्‍जिता चौधरी वडाध्यक्षको कोठामा मृत फेला परेपछि सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतिक विष्टले जानकारी दिए । युवती चौधरी आइतबार बिहान कार्यवाहक वडाध्यक्षकै कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् ।
कोठाको बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो । वडाध्यक्ष र युवतीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको मृतकका आफन्तले बताएका छन् भने वडाध्यक्ष चौधरीले भने केही समयअगाडि अर्की युवतीसंग विवाह गरेका थिए । मृतक चौधरीको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याउन लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
मृतकका दाजु रमेश चौधरीले १० वर्षदेखि कार्यवाहक वडाध्यक्षसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी बहिनी आइतबार बिहान उनकै कोठामा बाहिरबाट ताल्चा लगाएको अवस्थामा मृत फेला परेको जानकारी दिए । १० वर्ष देखि चौधरीसंग प्रेममा रहेका वडाध्यक्षले हालै अर्की युवतीसंग विवाह गरेको खुलेको छ । उनी श्रीमती सहित सम्पर्क विहिन भएका हुन् ।
चौधरी पा सो लगाएको अवस्थामा वडाध्यक्षको कोठामा फेला परेकी हुन् । तर घटनाको प्रकृति हेर्दा देह त्याग गरेको जस्तो नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ । युवतीको खुट्टाले भुईमा टेकिएको र बाहिरबाट ताल्चा लगाएइएको अवस्थामा देखिएको छ । उक्त वडाका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहको केही महिनाअघि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि चौधरीलाई कार्यवाहक वडाअध्यक्ष दिइएको थियो।
Previous articleघरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो आशंका ब्यक्त गरेकी रहिछन् भागीरथिले
Next articleसिमानामा डेडिकेटेड फो’र्स यसरि राखिदै,नेपाली से’ना र स’शस्त्र, कसले पाउला